Office Trainee | Steel King Company Limited ﻿
•	အဖွဲ့စည်း စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	စာရင်းများအား Manual စာရင်းများအား ရှင်းလင်းစွာ ထည့်သွင်းနိုင်ရမည်။
•	Microsoft Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Work location No. 296(B), Ayer Wun Road, Thaketa Tsp, Yangon, Myanmar.
•	ရုပ်ရည် သင့်တင့်ပြေပြစ်ရမည်။
Office Trainee Admin,Secretarial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Steel King Company Limited Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Office Trainee Jobs in Myanmar, jobs in Yangon